Baker-Olimpico PTFE dhimatay Gas Jiko gargaaraha - Shiinaha Baker-Olimpico PTFE dhimatay Gas gargaaraha Jiko qeybiye,-SHQD Factory
miisaanka: 0.6 oz / 17 g
•Awliyo xayndaab gaaska ul Non noqon karaa si fudud in laga saaro iyo in aad cunto kariye oo nadiif ah.
•ka on daata gubanaya Ilaali makiinada cuntada.
•Easy si aad u nadiifiso by biyo saabuun leh ama ammaan dhaqa.
•Heat u adkaysta: ku safay kariyaha gaaska adkeysan karaan ilaa heerkulka si ay 500 degrees Fahrenheit.
•Isticmaali karo labada dhinac.
•No warping, wrinkling ama laabanto!
•Perfect noocyada ugu bixiya oo safafka dhex gaaska.
•Non-ul sokeeye kala duwan gaaska aad kariyo shooladda dusheeda nadiif ah.
•design miiska Goo kuu ogolaanaya in aad si fudud u qabsadaan gubi gaaska.
•Safe in la nadiifiyaa by dhaqa, FDA ansixiyay, walwal lahayn.
Just qaadan this, qaado 1 gabal baxay oo dhigay kariyaha,design ee daboolka ka dhigayaa suurto gal ah in iska jar size kasta oo aad rabto in aad ku haboon kala duwan oo cunto kariyaha aad. Oo waxay kaa caawin in laga takhaluso meeshii gubatay ama ku daateen. Samaynta aad safar karinta ammaan ah oo ku faraxsan.